Sisinde kwi sihelegu semoto | News24
Sisinde kwi sihelegu semoto
U Nokuthula Ndzece akakholelwa ukuba usaphila, emveni kokuba kumbonzeleke inqwelo mafutha esahleli nesithandwa sakhe nge Cawa.PHOTO: thulani magazi
Isinde ngokulambisa intokazi yase Site B eKhayelitsha, uNokuthula Ndzece, kunye nesinqandamathe sayo u-Ayanda Maneli emva kokuba isithuthi - nekuranelwa ukuba umqhubi waso ubezitshize ngobhelu lomsele - simbonzeleke kwityotyombe labo kubusuku bangeCawa.
Esi siganeko senzeke kwingingqi yakoo U, mayela necala emva kwentsimbi ye 11.
Kutyholwa ngelithi umqhubi wesithuthi uye wohluleka kukusilawula kwindlela iMew Way, ngakoo TR, saze sakhalala umgaqo saya kutshayisa idonga elikhusela izindlu koo U, phambi kokuba siye kuxhathisa ngamatyotyombe amabini.
Esi siganeko sivuse umnyele eluntwini, ntoleyo ekhokelele ekonakalisweni kwesi sithuthi.
Ukanti abahlali abe belugcwabevu ngumsindo, babethe ngenqindi phantsi, benyanzelisa abanikazi sithuthi ukuba benze intlawulo, balungise nomonakalo odalwe kumatyotyombe amabini athe achaphazeleka kwesi siganeko.
Isimo sithande ukuba mandundu xeshikweni umnini sithuthi ezama ukusisusa kwindawo yexhwayela.
Abahlali banyanzelise ukuba alungise umonakalo kuqala, batsho bemthintela ukuba athabathe isithuthi sakhe.
Kunyanzeleke okokuba kungenelele amapolisa ukuze abe uyasifumana isithuthi eso, eqale wahlawula ama R2000.
Ephefumla ngesi siganeko, uNdzece uthe le meko imshiye edandathekile emphefumlweni. Uyichaze intlawulo yama R2000 njengomvungulo.
“Ayanelanga ukulungisa eli lam ityotyombe,” utshilo. “Kwaye ishiye umonakalo omkhulu kakhulu le moto, kuquka umabonakude, iwodrobhu kunye nebhedi.”
“Ndikhubeke kakhulu yile meko. Kwaye ngoku imiqolo yethu iphandle,” utshilo uNdzece.
Ukwavakalise inkxalabo ngokuphinda amise ityotyombe lakhe. Uthe eyona nto ibasindisileyo kule ngozi kukuba bebesancokola ngethuba imoto ingena.